XEERKA GABDHAHA XABSI MA KU JIREY? | ogaden24
XEERKA GABDHAHA XABSI MA KU JIREY?
Apr 22, 2018 - Aragtiyood
Magaca Eebbe aan ku bilaabo, Nabiga na aan naxariis iyo nabad gelyo Alle u waydiiyo. Waxaan dhashay aniga oo xor ah, waxaanna jeclahay inaan aakhiro u hoydo iniga oo xor ah. Intaas oo kale ayaan la jeclahay ruux kasta oo aan wax galabsan, lab iyo dhaddig kuu dooni ha ahaadee.
Ma ihi dadka xamaasadda ku kaca, dabaylaha dhacayana mid ba meel iima hawadiso. Ma ihi hal-yeeshaale hadba cidda uu qoraalkooda uu akhriyo la aragti ah, mana ihi qof dadka kale aragtiyohooda aan qaymayn oo qumanihiisu qoorta igu jiro.
Dhawr caano-maal Ayaan is moogaysiiyey xarigga iyo xukunka lagu riday Naciima Abwaan Qorane. Waxaan iri aamus oo madaxda ay gacanta ugu jirto ku qiimee, iyaga ayaa maslaxadda gobolka kaa oge, haddana waxaan la gam’I waayey oo urugo igu noqotay ilmadowda ka ooyeysa qolka mugdiga ah, markaas baan eegay curadayda Bushro oo xor ah iyo Niciimo oo sida qalbigaygu ii suureeyey qol ciriiri ah ku jeebaysan. waxaan milicsaday meeqaankii ay hablaha Soomaaliyeed lahaayeen, kaalintii ay ka soo qaateen xorriyad u dirirka, xilli aan Bari iyo Dalbeed la kala sheegan jirin. Waxaa iskay soo hortaagay Xaawo Taago Allaha u raxmee iyo Naciimo Qorene Eebbe ha soo daayee!
Waxaan is iri arriinta Niciima Abwaan Qorone, qormo kooban ka dheh, taas oo isugu jirta, codsi, xusuusiin, waano, talo-galyo, hoga-tusaalayn iyo farriin intuba ku socdaan Madaxweyne “Muuse Biixi Cabdi”
Oraahdaydu waxaa weeye “Madaxweyne xabsigu xal ma ah, dhallinyarada, gaar ahaanna gabdhuhu waxay u baahanyihiin, in maskaxda lagala hadlo intii gacanta laga hadli lahaa. Mudane Muuse, madaxda Soomaalilanad waxay shacabka u sheegaan inay ka gilgisheen dulmi ay u adkaysan waayeen, kaas oo inta ugu badani xabsi ku lug lahaa. Haddaba madaxweyne is waydii, muxuu xabsigaagu kaga duwanyahay xabsiyadii hore. Adaa waddanka joogaye ma la xiri jirey hablaha aan curan iyo ubaxa soo baxay.
Madaxweyne masiibo iyo magacba maalin bay baxaane Niciimo abwaan Qorane cafis madaxweyne ku sii daa, adiga oo tixgalinaya bulshada soomaaliyeed ee dhiigga walaalaha ka ah, siyaasaddu maalinba walaal bay leedahaye. Ku sii daah magaca gabadhnimo ee dhaqankeenna xurmada goonida ah ku leh. Ku sii daa’ da’yar nimadeeda, ku sii daa’ magaca Abwaan qorane, af-maalka waa laga sarriigan jiraye.
Aan halkaas ku joojiyo Qaybta 1aad ee qormadaan.
ABDIRIZAK ISMAIL HASHI (CIRRO)